ဧရာဝတီမှ ဦးဇင်း ဝီရသူ အင်တာဗျူးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးချင်တာလေးများ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဧရာဝတီမှ ဦးဇင်း ဝီရသူ အင်တာဗျူးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးချင်တာလေးများ
ရေးသူ-Jue Jue Than
၂၀၁၂ မေလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကြံခိုင်ရေးပါတီ ဗဟို အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်သောင်းမှ ဦးဝီရသူထံ လာရောက်တွေ့ဆုံစဉ် (ရခိုင်အရေးအခင်း မဖြစ်မှီ ၁ ပတ်ခန့်အလို)
ဓါတ်ပုံ FaceBook မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ဦးဇင်း ၀ီရသူရဲ့ အင်တာဗျူး ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန် စိတ်ထဲမှာ မေးချင်စိတ်ပေါက်လာတာလေးတွေရှိလို့ ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလဲ တော်တော်များများလေ့လာထားပါတယ်။ ကျွန်မရေးတဲ့စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့အချိန်လဲ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်း (၁)ရဲ့ အဖြေတွေထဲက စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျဖြစ်နေတာလေးတွေက———-
မိတ္ထီလာကိစ္စမှာ အသေအပျောက်များခြင်းဟာ မွတ်စလင်မ်တွေက “ နောက်တနေ့ မနက် ၄ နာရီ လုံခြုံရေးတွေ ရုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ ပုန်းအောင်းနေတဲ့ မွတ်စလင်တွေ သွေးကြွသွားပြီးတော့ ကြွေးကြော်သံတွေ ကြွေးအော်တယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေက သံပြိုင်အော်ကြတယ်။ အဲဒီတော့မှ မြို့လူထုက မွတ်စလင်တွေ ဒီမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ သိသွားကြတယ်။ သိသွားတဲ့အချိန်မှာ လာဝိုင်းကြတယ်။” လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ သာမန် အတွေးလေးနဲ့ပဲ တွေးကြည့်မိတာပါ။ တကယ်တမ်းဆိုရင် လုံခြုံရေးရှိနေတုန်း အော်ရင် တစ်ခုခုဖြစ်ရင်တောင် လုံခြုံရေးတွေ အားကိုးနဲ့ ပိုမိုက်လို့ ရနိုင်တာကို လုံခြုံရေးတွေ ရုပ်သွားမှ အော်တယ်ဆိုတော့ အဲဒီ မွတ်စလင်မ်တွေက လာဝိုင်းတဲ့ ဗမာလူအုပ်ထက် ပိုသတ္တိကောင်းပုံရတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။
မေးခွန်း (၂) ရဲ့ အဖြေ ထဲမှာ မတင်မကျ ဖြစ်မိတာက——————
“တကယ်တန်းကျတော့ သူတို့မှာ ဘာလက်နက်မှ မရှိဘူး။ ၁၀ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ပဲ တုတ်ပါတယ်။ အဲဒီတုတ်ကလည်း အိမ်ဖျက်ဆီးထားတဲ့နေရာကနေ ပါလာတဲ့တုတ်။ အဲဒါပဲ။ ကိုယ်က တုတ်ပဲ ပါတယ်။ ဘာလက်နက်မှ မပါဘူး။ ဟိုကလူတွေက ဓားတွေနဲ့ ဆီးခုတ်တယ်ဆိုတော့ အတုန်းအရုန်း ကျတယ်ဗျ။ ဒုတိယနေ့ကလည်း ဘယ်သူမှ မစီစဉ်ဘူး။ အသံကြောင့် ဖားသေဖြစ်သွားတာ။” လို့ ဖြေထားပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ ကျွန်မ တွေးမိတာက ရှိရှိသမျှသော ဓာတ်ပုံအများစု၊ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထဲမှာတောင် တွေ့နိုင်တာက လုံခြုံရေးတွေ ကြားထဲက တိုးထွက်လာတဲ့ လူတွေမှာတောင် နံပါတ်တုတ်လိုမျိုး အရာတွေ၊ နောက် တစ်ချို့ပုံတွေမှာဆို ဓားအိမ်နဲ့ ဓားလွယ်ထားတဲ့ လူတွေ ၊ အဲဒီလူတွေက ဘယ်က ရောက်လာပါသလဲ။ ပြီး ကြိုတင်မစီစဉ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အဲဒါတွေ ဘာလို့ အဆင်သင့်ပါနေရတာလဲ။
မေးခွန်း (၃) အတွက် အဖြေထဲက————————-
“ ဦးဇင်းတရားဟောတုန်းက အဲဒီမှာ စတေကာတွေ ၂၅ လောက် ဖြန့်ခဲ့တယ်။ အဲဒီစတေကာကလည်း Save Our Future အဲဒါလေးပါပဲ။”
အဲဒါဆိုရင် “ရန်ကုန်လို မြို့ကြီးမှာတောင် အလကားလိုက်ဝေနေတဲ့ တရားခွေတွေ၊ စတစ်ကာတွေ — စတာတွေကို ဘယ်သူက အကုန်အကျခံပြီး ဝေပေးနေတာလဲ၊ ဖြန့်ဖြူးနေတာလဲ “
မေးခွန်း (၄) ရဲ့ အဖြေ ထဲက——
“ ဦးဇင်း အခု အမှုတွေ အများကြီးကိုင်တွယ်ထားတယ်ပေါ့။—————- ဒီအမှုတွေအားလုံးကို ဦးဇင်းဆီမှာ ၅၀ ကျော် လက်ခံထားပြီးတော့ တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဖြေရှင်းပြီး—————–“
ကျွန်မသိထားတဲ့ သံဃာဆိုတာ လူတွေကို တရားရေအေး တိုက်ကျွေးပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် လောကီဘောင်ကိစ္စအ၀၀ ကိုစွန့်ခွာထားသူတွေပါ။ ခု ဦးဇင်း ၀ီရသူအနေနဲ့ အမှုတွေ အများကြီးကိုင်တွယ်ထားတယ် ဆိုတာဟာ ၀ိနည်းနဲ့ ညီပါရဲ့လား။ သံဃာ အလုပ်မလုပ်ဘဲ လူ့ဘောင်ရေးရာတွေမှာ ၀င်ပါနေသလို ဖြစ်မနေဘူးလား။ နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြည်သူ့ရဲ၊ စစ်တပ်နဲ့ တရားရေး ဆိုင်ရာ မဏ္ဍိုင်တွေအစား ဦးဇင်းကို အားကိုးရတယ်ဆိုတော့ တရားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အထက်မှာ ဦးဇင်း ရှိနေတာလား “ လို့ တွေးမိပါတယ်။
“ သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာန ကတောင် ခွင့်မပြုထားတဲ့ တံဆိပ်တစ်ခုကို တတ်သလောက် မှတ်သလောက် လိုက်ဖြန့်ဖြူးတယ် “ လို့ ဆိုထားတဲ့ အတွက် — ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ယခုကဲ့သို့ promote လုပ်မှသာလျှင် ခိုင်မြဲမည်ဟု ယုံကြည်ပါသလား။ ကျွန်မ နားလည်တာကတော့ ဘာသာတရား ယုံကြည်မှုဆိုတာ မိမိရဲ့ အတွင်းစိတ်သဏ္ဍာန်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းတဲ့ အရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အပေါ်ယံ promote လုပ်ခြင်းဟာ အဓိက အနှစ်သာရ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ပြီး– ဦးဇင်းက ခုလို ပြောလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အလွန်အမင်းအားနည်းလာသည် ဟု သွယ်ဝိုက်သော နည်းဖြင့် စော်ကားလိုက်သည်ဟု ခံစားမိပါသည်။
“NLD က ခွပ်ဒေါင်းမဟုတ်ဘူး။ မွတ်စလင်တွေရဲ့ မွတ်ဒေါင်းလို့ ဆိုထားပါတယ်။”
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာကြောင့် ဒီလိုနှုတ်ဆိတ်သွားသလဲဆိုတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နားရောက်နေတဲ့ သူတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆတယ်။”
“မြို့တွေတော်တော် များများရဲ့ NLD ရုံးတွေမှာ ရုံးထိုင်တာက မွတ်စလင်တွေများတယ်။ သူတို့တတွေကြောင့် ဗမာတွေက NLD ရုံးကို သွားပြီးတော့ လှည့်ပြန်လာရတယ်။”
“ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မမှာ အမြဲတမ်း ဓမ္မဘက်က ရပ်တည်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ မင်းကိုနိုင်က ပထမ ရခိုင်အရေးအခင်းမှာ တကယ်တန်းကျတော့ ဓမ္မဘက်မှာ ရပ်တည်တာ မတွေ့ရတော့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် အဲဒါကို ထည့်ဟောတာ။”
ပထမ အချက်—— NLD သည် နိုင်ငံတော်တွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ပါတီဖြစ်သောကြောင့် ဦးဇင်းအနေနဲ့ ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုခြင်းသည် အသရေဖျက်မှု မြောက်တာ သိပါသလား။
ဒုတိယအချက်— ယူဆတယ်လို့ သုံးထားတဲ့အတွက် ဦးဇင်းကိုယ်တိုင် သေချာမသိဘဲ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အမြင်နဲ့ ဆုံးဖြတ်တာ ဖြစ်တယ်လို့ တွေးမိပါတယ။်
တတိယအချက်— ကျွန်မ တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခုအချိန်မှာ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဆီသို့ အသွင်ကူးပြောင်းနေတဲ့ကာလ ဖြစ်တဲ့အတွက် အရည်အချင်းရှိတဲ့ မည်သူမဆို နေရာက မရှားပါဘူး။ မွတ်စလင်မ်တွေက ရုံးမှာရှိနေလို့ ဗမာတွေက ပြန်လာရတယ်ဆိုတာက အဓိပ္ပါယ်ရှိရဲ့လား လို့ တွေးမိပါတယ်။ တကယ်တမ်း အရည်အချင်းရှိမယ်ဆိုရင် အဲဒီလူအတွက် လုပ်စရာ အလုပ်တွေက ရှိနေတဲ့ အချိန်တောင် လောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
စတုတ္ထအချက် ————- ဓမ္မ = တရားမှု ၊ အဓမ္မ = မတရားမှု လို့ သိထားပါတယ်။ မှားခဲ့ရင် ပြင်ပေးပါ။ အဲဒီတော့ ကိုမင်းကိုနိုင် အနေနဲ့ ရခိုင်အရေးအခင်းမှာ ဓမ္မ ဘက်မှာ မရပ်ဘူးလို့ ဆိုရင် အဲဒီ ဓမ္မ ဆိုတဲ့အရာက စစ်မှန်တဲ့ ဓမ္မ ဟုတ်မနေလို့ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
မေးခွန်း (၇)——— ။ဆရာတော်ရဲ့ ဟောပြောချက်တွေမှာ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ၇၈၆ အမှတ်တံဆိပ်ရေးထားတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ အားမပေးရဘူးလို့ ပါနေတော့ ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုတွေဖြစ်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်း ကြားမှာ မယုံကြည်မှုတွေ၊ မုန်းတီးမှုတွေ မဖြစ်စေနိုင်ဘူးလားဘုရား။ ဆိုတာကို ———————–
“အဲဒါက ဗမာနည်းမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ မွတ်စလင်နည်းလေ။ မွတ်စလင်တွေ အဲဒီအတိုင်း ကျင့်သုံးတာ။”
အဲဒီအချက်မှာ — ဦးဇင်းအနေနဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး တို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ ဒီလောက်လုပ်နေတာတောင် ဒီ ၇၈၆ ကိစ္စကို မသိဘူးဆိုတော့ ဦးဇင်း လုပ်နေတဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေက တကယ် ရင်ထဲက စစ်မှန်တဲ့စေတနာနဲ့ လုပ်နေတာ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယ ၀င်မိပါတယ်။ တကယ်ကို စိတ်ထဲမှာ မကျေလည်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် အဲဒီ အချိန်တွေမှာ မေးခဲ့ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။
တလက်စတည်း အဲဒါလေးကိုလဲ နည်းနည်း ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ဆိုင်တွေ အိမ်တွေမှာ ၇၈၆ တပ်ခြင်းသည် “ မဟာကရုဏာတော်ရှင် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏ နာမတော်ဖြင့် အစပြုပါ၏” ကို အာရဗီ ဗျည်းအက္ခရာတွေရဲ့ နံပါတ်တွေ ပေါင်းခြင်းနဲ့ ရေးထားတာပါ။ ပြီး ကျွန်မတို့တွေဟာ အစားအသောက်ရဲ့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကို အထူးကြပ်မတ်ထားတာပါ။ ကုရ်အာန် ကျမ်းစာထဲမှာ သွေးစားဖို့ ခွင့်မပြုထားပါဘူး။ (ဗမာအခေါ် လည်လှီးသား ) လည်ပင်းသွေးကြောကို ဖြတ်ပြီး သွေးကို ကုန်စင်အောင် ထုတ်ထားတဲ့ အသားကိုပဲ စားခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲလို လှီးဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်း အလ္လာဟ့်ရဲ့ နာမတော်ကို တသ ပြီး မှ လှီးဖြတ်ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ၇၈၆ တပ်ထားခြင်းဖြင့် အစားအသောက်ကို လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေစားသောက်နိုင်ခြင်းကြောင့် အဲဒီအမှတ်အသားကို တပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်ဆိုင် ဆိုတာမှာတောင် တခြား အစားအစာ ၊ အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စတာတွေကို ကြိုက်တဲ့နေရာက ၀ယ်လို့ ရပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင်——City Mart ဘယ်သူပိုင်လဲ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ရွှေပုစွန် – မွတ်စလင်မ်ပိုင်လား၊ တခြားဘာသာဝင်ပိုင်လား ———– သွားကြည့်လိုက်ပါ။ အယူသည်း ပါတယ်လို့ ခုဝိုင်းပြီး လက်ညှိုးထိုးထားတဲ့ (ဘုရ်ခါ) အမည်းဝတ်တွေ၊ မုတ်ဆိတ်နဲ့ လူတွေ ၊ အဖြူရောင် အရှည်ကြီး ၀တ်ထားတဲ့ လူတွေ ရှောင်လို့တောင် မလွတ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့တောင် ခုလိုမျိုး ပြောနေတာကို တကယ် အံ့သြမိပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ အသားကလွဲလို့ ဘယ်ပစ္စည်းမဆို ပစ္စည်းမှန်ပြီး ဈေးမှန်တဲ့ ဆိုင်မှာပဲ ၀ယ်ယူသုံးစွဲပါတယ်။
ပြီးတော့ သူတို့တပ်လို့ ငါတို့လဲ တပ်မယ်ဆိုတာက ကူးချတာပါပဲ။ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားထားတဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာသည် သူများကို ကူးချမှ အောင်မြင်ခြင်းကို ရောက်နိုင်တော့မယ်လို့ ယူဆထားတာပါလား ။ ဒါဆိုရင်တော့ မြတ်စွာဘုရားကိုပါ စော်ကားတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဦးဇင်းအနေနဲ့ ကိုယ့်သာသနာကို ဖြန့်ဖြူးချင်စိတ်များပြီး သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
ဖြေထားတာလေးတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် —————-
ပထမအကြိမ် ဦးဇင်း ထောင်ကျခဲ့တာက ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှု ဖြစ်ပွားစေသော စာရွက်စာတမ်းများ ဝေခဲ့တာကြောင့် ဆိုတော့ ထောင်က ထွက်လာပြီးနောက်မှာရော ဦးဇင်းရဲ့ မုန်းတီးရေး အစွဲတွေ တကယ် ကျွတ်ခဲ့ရဲ့လား ဆိုတာကို သံသယဖြစ်မိပါတယ်။
“အဲဒါအရေးယူရမယ်။ ပေါ်ပေါ်တင်တင်လုပ်တဲ့သူကို အရေးယူတာထက်၊ နောက်ကွယ်ကနေ သွေးထိုးပြီးတော့ သပ်လျှိုနေတဲ့သူတွေကို အရေးယူတာက ပိုပြီးထိရောက်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်- မော်လ၀ီ ဆရာတွေပေါ့။ သူတို့တွေက ကလေးလေးတွေကို စာသင်ပေးတယ်။သူတို့တွေက သွေးခွဲ စကားတွေကို ပြောပြီးတော့ သွေးခွဲတာများတယ်။ ကလေးလေးတွေက ရဟန်းသံဃာတွေကို ကြည့်တဲ့ အကြည့်က တကယ့်ရန်သူလိုပဲ။ ဗမာတွေကို ကြည့်တဲ့ အကြည့်က တကယ့်ရန်သူကြီးတွေလို။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ သွေးခွဲတဲ့သူတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေကို မှိုင်းတိုက်ပြီးတော့ သွေးခွဲနေတဲ့နေတဲ့သူတွေကို အရေးယူနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။”
မော်လ၀ီဆရာတွေက ကလေးတွေကို စာသင်ပေးပြီး သွေးခွဲတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါ— အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဦးဇင်း အနေနဲ့ စိတ်ထဲမှာ မကျေလည်ထားဘူးဆိုရင် ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ဦးဇင်းရဲ့ မွတ်စလင်မ် မိတ်ဆွေတွေကို မေးကြည့်ခဲ့နိုင်ပါရက်နဲ့ မမေးဘဲ ခု အင်တာဗျူးမှာတောင် ခုလို ထပ်ဖြေထားတာတွေ့ရတော့ ဦးဇင်းရဲ့ ချစ်ကြည်ရေး ကိစ္စကြီးက သံသယဖြစ်စရာကောင်းလှပါတယ်။
ကြုံတုန်းတလက်စတည်း– တကယ်လို့များ ဦးဇင်းအနေနဲ့ သွားလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် ဦးဇင်းကြိုက်တဲ့ ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းကို လက်ညှိုးထိုးပါ။ တပည့်တော် ခေါ်သွားပေးပါ့မယ်လို့ ဒီနေရာကနေ ပြောချင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်— ကလေးတွေက ရဟန်း သံဃာကို ကြည့်တဲ့ အကြည့်က တကယ့်ရန်သူလိုပဲ လို့ ဖြေထားတော့ မေးစရာ မေးခွန်းလေး တစ်ခု ထပ်ထွက်လာပါတယ်။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်သည် မေတ္တာတရားတော် ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်မ လေ့လာသိရှိထားပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘုရားသားတော်ဖြစ်တဲ့ ၊ သံဃာဖြစ်တဲ့ ဦးဇင်းက ကိုယ့်ကို ရန်သူလို ဆက်ဆံတဲ့လူကို မေတ္တာမထားနိုင်ဘူးဆိုတော့ ဦးဇင်းကိုယ်တိုင် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်ကို တကယ်ကျင့်ကြံ အားထုတ်ပါရဲ့လား။
ကျွန်မ တွေးမိတဲ့ အပိုင်းအစလေးတွေပါ။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား နဲ့ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာအား စော်ကားလိုသည့် စိတ် မြူတစ်မှုန်စာတောင် မရှိပါ။ သာသနာဟု အမည်တပ်ပြီး သာသနာဖျက်မှာကိုတော့ တကယ်စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘုရားပုထိုးတွေ အလွန်များပြားပြီး အလွန်သပ္ပါယ်စရာ ၊ နေရာတိုင်းမှာလဲ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင် အလှတွေ၊ မတူညီကွဲပြားတဲ့ အလှတွေနဲ့ အလွန်လှပတဲ့ နိုင်ငံလေးပါ။ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယ ဘုရားပုထိုး အများဆုံး မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ကျွန်မရဲ့ မွေးရပ်မြေကိုလဲ အလွန်ချစ်လို့ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေကိုယ်တိုင် ကျွန်မရဲ့ နာမည်ရင်းမခေါ်ဘဲ မြို့နာမည်နဲ့ တွဲခေါ်ခဲ့ကြတာပါ။
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစု ရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလေးကို ကမ္ဘာမှာ အကြမ်းဖက်နိုင်ငံ၊ အစွန်းရောက်နိုင်ငံဆိုပြီး နာမည်ပျက်မှာကိုတော့ အရမ်းစိုးရိမ်မိပါတယ်။
ကျွန်မ အစ္စလာမ် ဘာသာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ မွတ်စလင်မ်တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အကြမ်းဖက် အစွန်းရောက် မဟုတ်ပါဘူး။
Jue Jue Than FB စာမျက်နှာ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
This entry was posted on March 31, 2013, in အင်တာဗျူး, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဒီမိုကရေစီကို ဖျက်ဆီးမည့်သူများ၊ အကြမ်းဖက်သမားများအတွက် နေရာမရှိ၊
အာဖရိကတိုက်ကရ၀မ်ဒါနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့တွတ်ဆီနဲ့ ဟူတူလူမျိုးစု နှစ်စုအပြန်အလှန်မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ တဲ့အခြေအနေမျိုး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေပြီ၊(မောင်ဝံသ) … →